NDI UWEOJII NA-EZIGA N'ULO SARAKI NA ABUJA: ONYE NDUMODU NTAAKUKO
Home https://isimbido.tv/foxwoods-casino-bingo/ borderlands 2 eridium slot machine dice
NDI UWEOJII NA-EZIGA N’ULO SARAKI NA ABUJA: ONYE NDUMODU NTAAKUKO
Yusuph Olaniyonu, onye nduzi mgbasa ozi maka Senator Bukola Saraki kwuru na ndị uweojii na-egbochi ụlọ ụlọ isi ya na ụtụtụ Tuesday.
N’okwu WhatsApp, o kwukwara na ọ bụ onyeisi oche ndị omeiwu, Ike Ekweremadu ka ndị DSS gbara gburugburu.
Kola Ologbondiyan, ode akwukwo nke ndi otu ochichi nke ndi ochichi nke ndi mmadu kwuru na enweghi nchebe na ulo Ekweremadu, mgbe o kwuru, si: “ndi oru nchebe na-akwado onye isi ochichi isi, Ike Ekweremadu, obibi n’ime Apo, Abuja”. Onye ọnụ na-ekwuru Ekweremadu, Uche Anichukwu kwadoro nchebe ahụ wee sị na ọ gụnyere ndị na-arụ ọrụ na Commission nke Mmekọ Ego na Ego.
Ejighị nkwupụta abụọ ahụ kwupụta. Ndị nche anaghị ekwu okwu kpatara ihe kpatara ya.
Ebe nchekwa na oche Saraki na Abuja
Mba ahụ kwuru na ndị uweojii na-egbochi mkpọchi Saraki maka ihe dịka minit 30. Ndị agha ahụ na-aga ịhapụ ụlọ ahụ n’ihe dị ka elekere asaa nke ụtụtụ mgbe ndị uweojii bịarutere.
“Mgbe a kpochapụrụ ndị nnọchianya ka ha gaa n’ihe dị ka elekere 7:30 nke ụtụtụ, ụfọdụ ndị uweojii na-akwaga ya na Mgbakọ Mba.”
Ekwuo ndị uweojii ka ha nweta nkwa site n’aka Onye isi oche nke Senate na ọ ga-asọpụrụ òkù nke Onye Nlekọta Ndị Isioji nke ndị uweojii na-akpọ.
APC NA-EKWU NA PDP NA-ACHO NDU MGBE O NWUSIRI
Onye isi ulo oru uweojii nke ndi uweojii akpokuwo Saraki ka ha kwue ihe dika elekere 8 nke uhuruchi taa na Guzape na ndi uweojii ka ha nyekwuo nkwuputa banyere otutu ihe ndi mere na Offa, Kwara State on April 5, nke gburu mmadu iri ato.
Ụfọdụ n’ime ndị a na-enyo enyo ejidere na Saraki nyere ha ego na egbe dịka ndị òtù nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emegide ndị na-emegide ehi.
N’akwụkwọ ozi e zigara Saraki n’abalị Monday, Idris rịọrọ ya ka ọ bụrụ onyeisi ụlọ ọrụ nyocha na Team Response Team na Guzape Junction, Asokoro Extension, Abuja na 8a.m.
A GBAGBURU MADU IRI NA OTU NDI NA-ANYA UGBO ALA NA NZUZO
Ndị uweojii ahụ nwere na June 4 ka ha rịọ ka Saraki meghachi omume na nkwupụta nke ụfọdụ n’ime ndị a na-enyo enyo jidere na njide ohi kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme nke Nigeria. Saraki dere otu nkwupụta nke ụbọchị 7 June.
Idris chịrị okwu ahụ ezughị oke.
“Mgbe i nyesịrị akwụkwọ ozi gị leta ndị uweojii, achọpụtala na nkwupụta ahụ chọrọ ka dokwuo anya na yana eziokwu na ị kwuru na edeghị ederede ederede nke ndị a na-enyo enyo, ị ghaghị ịkọ akụkọ ka ndị uweojii mee nkwupụta ndị ọzọ mgbe ha nyechara gị nkọwa zuru ezu nke okwu ndị na-enyo enyo.
“N’ikwekọ na n’elu na a gwara gị ka ị kọọrọ onyeisi ụlọ ọrụ nyocha na Team Response Team na Guzape Junction, Asokoro Extension, Abuja na 24 nke July, 2018 na 8am iji nyochakwuo okwu ahụ.”
Na nzaghachi n’abalị a, Saraki kọwara òkù ahụ dịka ntụgharị uche nke e mere iji nweta nzube ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
“Ndị uwe ojii egosila na ha merụrụ ma kwadoo nyocha ha n’ime ihe ohi nke Offa. Ha emeela ya ka ọ bụrụ ngwá ọrụ nke ndị nwere ike iji gbochie ndị mmegide a mara, okwu nchụso maka ịchọrọ ndị mmadụ ịhọrọ nhọrọ nke ịchọrọ ịchụso ọchịchọ ha na ihe ị ga-eme ka ndị mmadụ pụọ na APC ga-emerụ ahụ ahụ ohere nke ndi otu na ntuli aka na-abia.
“Achọrọ m ime ka o doo anya na enweghi m aka ọ bụla ma ọ bụ ihe ọhụụ ma ọ bụ mmebi omekome ọ bụla. Ndị uweojii na ngwa ngwa ha na-emechu m ihu zigara m òkù ahụ n’elekere asatọ nke ụtụtụ wee rịọ ka m kọọrọ ya ọdụ ụgbọ elu ahụ n’elekere 8 nke ụtụtụ. O doro anya na nke a gosipụtara enweghị olileanya ha n’ihi na anaghị m ahụ ihe kpatara ha ji ọsọ ọsọ. “, Saraki kwuru.
Tags: BUKOLAhotihenemeihenemenobodoIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsNIGERIAnobodoPOLITICSSARAKISENATORUche AnichukwuUWEOJI